Amasango avuliwe, kusho abebandla leNkosi uVela Shembe | News24
Amasango avuliwe, kusho abebandla leNkosi uVela Shembe
eThekwini - INkosi uVela "Imisebeyelanga" Shembe okuyiyona nkosi eyaqinisekiswa eNkantolo eNkulu yaseThekwini njengomholi ofanele ukuhola ibandla lakwaShembe ngokusemthethweni, isikhotheme.
Lokhu kwenzeka nje umbango wobuholi bebandla usaqhubeka njengoba abasebandleni laseBuhleni lona elimelwe yiNkosi uMduduzi "uNyazilwezulu" Shembe baveza ukuthi bazofaka isicelo sokusiphikisa isinqumo senkantolo.
Ukukhothama kwale nkosi ngezintatha zangoLwesihlanu kuzume kakhulu, njengoba ingazange igule.
UNkululeko Mthethwa okhulumela ibandla laseThembezinhle, uveze ukuthi bashaqekile beyibandla ngalokhu okwenzekile, kodwa ngeke bakhale kakhulu ngoba iNkosi iwenzile umsebenzi wayo wokubahola njengebandla.
“Sifunde lukhulu eNkosini, yingakho singeke sikhale sibheke emaceleni, kodwa sikhala sibheke phambili ngoba izimfundiso zayo zimi njalo,” kusho yena.
OLUNYE UDABA:'Kusizumile ukudlula kweNkosi uVela Shembe ngoba kayigulanga'
Ngokusho kwakhe, iNkosi yayibakhumbuza ukuthi ithemba labo alihlale kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi.
“Okuhle ngeNkosi wukuthi ibe ngumholi oqotho futhi othembekile ngaso sonke isikhathi. Ibihlezi isitshela siyibandla ukuthi ithemba lethu kumele njalo lihlale likuNkulunkulu, singabheki yona ngoba luyofika usuku lokuhamba kwayo emhlabeni, ngakhoke abantu kumele baqinise okholweni lwabo,” kuqhubeka uMthethwa.
Ngesikhathi ebuzwa ngokuthi ngabe kukhona abakulindele ebandleni laseBuhleni, okungaba ngamazwi enduduzo nokubambisana njengoba bebhekene nesikhathi esinzima.
UMthethwa uthe: “Okwamanje besingakezwa lutho, kodwa futhi amasango avuliwe, njengenjwayelo. Uma kuvele isimo esifana nalesi ekhaya, wonke umuntu wamukelekile.
"Okubalulekile okumele sikwenze wukuthi sihlangane siwumndeni nebandla sidingide udaba lwakhe nakho konke okumele kwenziwe njengoba iNkosi ikhotheme, sizokwamukela wonke umuntu ozobambisana nathi kulokhu.”